အလုပ်တွေပင်ပန်းပြီး အိပ်မောကျနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကာချစ်မ၀ဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ချစ်သူ (ဗီဒီယို) – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းဝေတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို အတူတူလုပ်ရင်း သာယာပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်နော်။ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ချစ်သူဟာ ယောကျာ်းလျာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပေမယ့် ကာယကံရှင်များမှ ပြန်ဖြေရှင်းထား တာတော့ မရှိပါဘူးနော်။
တစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ကို တစ်ယောက်က ဖြည့်ဆည်းရင်း မခွဲနိုင် မခွာရက်ချစ်နေကြတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေတို့ အတွဲလေးကို ပရိသတ်များကလည်း အားကျလို့ နေပါတယ်နော်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်များက စောင့်ကြည့်နေတာကြောင့် အခုမှာလည်း ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ချစ်သူမှ ကြည်နူးစရာ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု မျှဝေပေးလာ ခဲ့ပါပြီနော်။
ဂီတသံစဉ်ကို နားထောင်ရင်း အရမ်းကို အိပ်မောကျနေတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ မျက်နှာလေးကို ယုယုစွာ ကိုင်ရင်းနဲ့အသည်းတွေ ယားလာပြီး ဗီဒီယိုပါ ရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်နော်။ တကယ်ကို လိုက်ဖက် လွန်းတဲ့ အတွဲလေးကိုကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အားကျနေပြီ မဟုတ်လား???
ပရိသတျကွီးရေ ခိုငျနှငျးဝတေို့ ခဈြသူနှဈဦးကတော့ ပရဟိတအလုပျတှကေို အတူတူလုပျရငျး သာယာပြျောရှငျနကွေပါတယျနျော။ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ခဈြသူဟာ ယောကျြားလြာဖွ ဈတယျလို့ သတငျးတှထှေကျနပေမေယျ့ ကာယကံရှငျမြားမှ ပွနျဖွရှေငျးထားတာတော့ မရှိပါဘူးနျော။
တဈယောကျလိုအပျခကျြကို တဈယောကျက ဖွညျ့ဆညျးရငျး မခှဲနိုငျ မခှာရကျခဈြနကွေတဲ့ ခိုငျနှငျးဝတေို့ အတှဲလေးကို ပရိသတျမြားကလညျး အားကလြို့ နပေါတယျနျော။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ သှားလာလှုပျရှားမှုတှကေို ပရိသတျမြားက စောငျ့ကွညျ့နတောကွောငျ့ အခုမှာလညျး ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ခဈြသူမှ ကွညျနူးစရာ ဗီဒီယိုလေးတဈခု မြှဝပေေးလာခဲ့ပါပွီနျော။
ဂီတသံစဉျကို နားထောငျရငျး အရမျးကို အိပျမောကနြတေဲ့ ခဈြသူလေးရဲ့ မကျြနှာလေးကို ယုယုစှာ ကိုငျရငျးနဲ့အသညျးတှေ ယားလာပွီး ဗီဒီယိုပါ ရိုကျထားလိုကျ ပါတယျနျော။ တကယျကို လိုကျဖကျလှနျးတဲ့ အတှဲလေးကိုကွညျ့ပွီး ပရိသတျတှလေညျး အားကနြပွေီ မဟုတျလား???